Best izixhobo rock rock wokwenza kunye Factory | Gimarpol
Ukukhangela isixhobo esifanelekileyo kuyo yonke imisebenzi yokubamba ngesandla? Ukuzilolonga kwelitye likaGimarpol lolona khetho lwakho lubalaseleyo. Banikezela uyilo oluhlaziyiweyo, ukusetyenziswa komoya okuphantsi kwaye kulula ukusingatha. Ngala manqaku, unokuxhomekeka kwintsebenzo ephezulu, ukomelela kunye neendleko zokugcina eziphantsi. Yintoni enye, inkqubo yokuthambisa igcina iindawo ezisebenza rhoqo zikhuselwe kwaye isantya sokugrumba rhoqo sinceda ukugcina ubomi benkonzo ende.
Uhlobo lwe-Pneumatic rock drill lokugrumba kwilitye elilukhuni kwaye lityekele kwicala lomngxunya, linokuba ngumngxunya we-anchor hole, umngxunya uyi-35 ~ 45 mm ubukhulu, kunye nobunzulu bokubhola obuyi-5 yeemitha.
Kuxhomekeke kubungakanani bendlela yecandelo lokuwela kunye nokusebenza, umatshini unokusetyenziswa imilenze yegesi ye-FT160A, uhlobo olude lwe-FT160C yohlobo lwegesi, imilenze ye-FT160B edibeneyo yokubeka ukuba yome kwaye emanzi ukubhola.
Igama leparameter Icandelo Ixabiso leparameter
Ubunzima ikg 27
Ubude mm 659
Ububanzi besilinda mm 82
Ukubetha iPiston mm 60
Ukusetyenziswa kwegesi L / s 65
Ukubhola kunye nobuninzi Hz ≥37
Amandla e-lmpact J 269
Isantya seBorehole mm / min 75475
Ububanzi bequla mm 34-42
Perforating ubunzulu m 5
Shank mm I-22 × 108 土 1
Indawo yokusebenzela kunye nePakeji
Egqithileyo Umbhobho wokugrumba iTaper
Okulandelayo: Umsonto iintonga